Thwebula Megapolis 3.30 – Vessoft
Megapolis – umdlalo isu sokuthuthukiswa edolobheni elincane megalopolis big. Umgomo oyinhloko umdlali ukuthuthukiswa kanye ukukhuphuka kwezinga labantu emzini ingqalasizinda. In the Megapolis kukhona izakhiwo hlobo nenjongo ezahlukene olutholakalayo ukwakhiwa phezu komhlaba namanzi. Njengoba lo mdlalo iqhubeka umdlali ephetha izivumelwano, eqoqa inzuzo, azikhulule imithombo nasekwenzeni eminye imisebenzi edingekayo ukuze bathole imiklomelo ngcono isimo emzini. Megapolis ikuvumela ukuba kancane kancane ukwandisa umbuso umuzi futhi awuqede kwakhiwe izakhiwo ezahlukene ukuthi zitholakala ngaphandle komuzi. Megapolis lusenza ukufinyelela futhi kusize nezinye abadlali bathuthukise emizini yabo.
Ihluzo 3D and qualitative imininingwane yetintfo
Amathuba Wide in imikhakha ehlukene ekuthuthukiseni umuzi
Amabhilidi amaningi atholakale ezehlukile
Inani elikhulu lemisebenti
Ukuthuthukiswa Joint komuzi nabanye abadlali
Amazwana on Megapolis:
Megapolis Ahlobene software: